Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Pegasus weputara ụzọ Georgia ọhụrụ, Ukraine, Turkey
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa na Georgia • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
Eggbọ elu Pegasus na-ebupụta ụzọ ọhụụ mba ọhụrụ si London, UK
Pegasus weputara uzo ohuru na Batumi na Georgia, Odesa na Ukraine
Pegasus na-ebupụta ụgbọ elu ọhụrụ nke ụlọ n'etiti Istanbul Sabiha Gökçen na Iğdır
Pegasus na-enye mgbanwe zuru oke maka ụgbọ elu nke 31 July 2021 gbara akwụkwọ
Lowgbọ elu ụgbọ ala Turkish, Pegasus, na-amalite ụzọ ọhụrụ si London na Batumi na Georgia site na Istanbul.
Ugboro abụọ n'izu ụgbọ elu n'etiti London Stansted na Batumi International Airport site na Istanbul Sabiha Gökçen ga-amalite na 7 May 2021.
Pegasus na nso nso a malitere uzo ohuru site na London Stansted rue Odesa, site na Istanbul Sabiha Gökçen na 28 March 2021.
Linegbọ elu ahụ ga-ebikwa ụzọ ụlọ ọhụrụ, na-efe efe ugboro atọ n'izu site na Istanbul Sabiha Gökçen na Iğdır na 7 May 2021, yana njikọ dị na London Stansted.
Flightsgbọ njem ndị Pegasus na-aga Batumi ga-apụ na London Stansted Airport ruo Batumi International Airport site na Istanbul Sabiha Gököen na Fraịde na Mọnde na 00:05; ebe ụgbọ elu si na Batumi International Airport na London Stansted site na Istanbul Sabiha Gökçen ga-apụ na Fraịde na 19:40 na Mọnde na 14:05.
Odesa bụ ebe nke ise nke Pegasus na Ukraine, na-agbakwunye na ụgbọ elu ya dị na Kharkiv, Kyiv, Lviv na Zaporizhzhia. Ndokwa ụgbọ elu si London Stansted gaa Odesa International Airport site na Istanbul Sabiha Gökçen ga-apụ na Tọzdee na Sọnde na 00: 00, ebe ụgbọ elu si Odesa International Airport ga-apụ n'otu ụbọchị ahụ na 18: 45 (oge mpaghara itinye).
Eggbọ elu ụgbọ elu Pegasus na-aga Iğdır ga-apụ site na Istanbul Sabiha Gökçen Airport ruo I todır Şehit Bülent Aydın Airport na Tuesday, Fraịde na Sọnde na 14:40, ebe ụgbọ elu si I fromdır Şehit Bülent Aydın Airport ruo Istanbul Sabiha Gökçen Airport ga-arụ ọrụ n'otu ụbọchị ahụ 17: 20 (oge mpaghara itinye).